သင်၏ Android Tablet တွင်တရားဝင် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | Android application များ, Android တက်ဘလက်များ, လဲ tutorial, Whatsapp
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်သင်အော်ဟစ်နေသောသင်ခန်းစာများကိုပြန်လည်ပို့ပေးပါမည်။ ဒီဗီဒီယိုအသစ်မှာမင်းကိုငါသင်ပြတော့မယ် တရားဝင် WhatsApp application ကို Android operating system ဖြင့်တက်ဘလက်တစ်ခုတွင် install လုပ်ပါ.
ငါပြောတဲ့အခါ တက်ဘလက်အတွက်တရားဝင် WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာ၊ ကျွန်ုပ်သည် Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသာရည်ညွှန်းလိုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းများတွင်သာမန်အားဖြင့်တပ်ဆင်သည်ကိုတရားဝင် Android အက်ပလီကေးရှင်း၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အသိပေးအကြောင်းကြားစာရရှိသည် ဤအပလီကေးရှင်းသည် Android တက်ဘလက်များအတွက်လိုက်ဖက်သည်.
အောက်ပါမျက်နှာပြင်တွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းတရားဝင်လျှောက်လွှာ WhatsApp ကို Google Play Store မှ Android တက်ဘလက်များအတွက်မရနိုင်ပါ သင့်တွင် SIM ကဒ်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်တက်ဘလက်တစ်ခုမရှိလျှင်၊ တက်ဘလက်များဟုသတ်မှတ်ထားသောဆိပ်ကမ်းများမှတရားဝင် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပြdevicesနာများစွာရှိသောကိရိယာများစွာမရှိပါ။
ဤလိုင်းများအထက်တွင်ကျွန်ုပ်ကျန်ခဲ့သောဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သွားမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည် Android Tablet တွင် WhatsApp application ကိုခံစားနိုင်သည်ဤအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံး ၀ င်သော၊ ခေတ်မမီတော့သော၊ အသုံးဝင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သည့် WhatsApp ၏ ၀ က်ဘ်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ဘဲကိရိယာများအားလုံးမှအမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုပြုရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့် WhatsApp ကို Android Tablet တွင်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ Android ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ နှင့်အပိုင်းအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ option ကို enable လုံခွုံရေး ကျနော်တို့ခွင့်ပြုခံရဖို့သွားကြသည် မသိသောရင်းမြစ်များမှအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ပါ သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့အပြင်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အပလီကေးရှင်းများ။
ယခုငါတို့သာလျှင်ရကြလိမ့်မည် တက်ဘလက်များအတွက်တရားဝင် WhatsApp apk ကို download လုပ်ပါဂူးဂဲလ်၏ကိုယ်ပိုင် Play စတိုးမှ Android စမတ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်မည့် apk တစ်ခုဖြစ်သည်၊ တစ်ခုတည်းသောအရာ တရားဝင် WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတိုက်ရိုက်ကူးယူသွားမှာပါ ၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းပြီး Google Play စတိုး၌တွေ့ရှိရသောကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
ဒီလင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ သင်တရားဝင်၏ download လုပ်ပါလိမ့်မယ် သင်၏ Android Tablet တွင်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုမည့် WhatsApp အက်ပလီကေးရှင်း၏နောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်း။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုတွင်တွေ့ရမည့် application icon ကိုသာနှိပ်ပါ / Downloads Android package ကို auto-installer ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၊ application အတွက်လိုအပ်တဲ့ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုလက်ခံပါ Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.
အစပိုင်းမှာဖွင့်ပြီးအစိမ်းရောင် Accept and Continue ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သတိပေးချက်တစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ် အက်ပလီကေးရှင်းသည်တက်ဘလက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒီဟာကိုစိတ်မပူပါနဲ့ခလုတ်ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ OK သင်၏ Android Tablet တွင်သင်ခံစားချင်သော WhatsApp အကောင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုယခုသင် configure လုပ်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ သင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရှိရမည်၎င်းသည် Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ iPhone ဖြစ်စေ၊ သမားရိုးကျဖုန်းဖြစ်စေဖြစ်စေဤကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည့် SMS ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သို့မဟုတ်၎င်းမှပျက်ကွက်ပါက၎င်းသည်ဆက်သွယ်မှုကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ Android Tablet မှာစဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ WhatsApp အကောင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်သို့ထည့်သွင်းရန်ကုဒ်ကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းဖုန်းနံပါတ်ကိုအသက်သွင်းရန် (သို့) အလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်သည်သင့်တော်သလိုဆက်လက်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုပြောစရာမလိုပါဘူး ကျွန်ုပ်တို့တစ်ကြိမ်တည်းသာဤအကောင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သင်က Tablet ပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုသင့်ရဲ့ Smartphone ပေါ်မှာတစ်ချိန်တည်းဖွင့်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android Tablet တွင်တရားဝင် WhatsApp application ကိုမည်သို့သွင်းရမည်နည်း